Isithombe sokuthuthukisa izithombe kusuka ku-Semalt
I-Artem Abgarian, i-8 (Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, ithi ukuthuthukiswa komfanekiso we-SEO kungenye yezindlela ezibaluleke kakhulu zabathengisi nababhlogi, kepha njalo kunqatshelwa. Umzila wokusesha ulahlekile uma uthola ngokushesha. I-Google igcizelela izithombe ezingalungile futhi ihlukanise nezithombe zekhwalithi emiphumeleni yayo yosesho. Uma ubhala okuqukethwe futhi isithombe sakho sihambisana nendaba yakho, i-Google izoyiveza ngendlela efanele, futhi izithombe zingase zivele ziphakeme emiphumeleni yayo yosesho uma ifanelekile kahle.
1. Lungiselela izithombe ze-SEO:
Uma ufuna ukuthuthukisa injini yokusesha rankings of iwebhusayithi yakho, kufanele ulungiselele izithombe SEO. Zonke izakhi, kusukela ehlokweni kuya ezixhumaneni ezingenayo nezingaphakathi, kufanele zilungiswe ngendlela efanele futhi ngokwemithetho ye-Google.
2. Yisho izithombe ngokufanele:
Ngokuvamile, abantu ababizi kahle izithombe zabo, futhi uma wenza iphutha elifanayo, kunamathuba wokuthi isayithi lakho ngeke lithole isikhundla esingcono. Kufanele uqambe igama ngezithombe ezikhiyekile nemishwana ehambisana nokuqukethwe kwakho. Qinisekisa ukuthi amagama esithombe achaza, etshela izivakashi konke mayelana nokuqukethwe kwakho.
3. Gwema izifinyezo:
Kungakhathaliseki ukuthi uluhlobo luni lwezinsizakalo ozinikezayo, ungathola njalo amagama angukhiye afanelekile nemishwana. Kubalulekile ukugwema izifinyezo zokwandisa ukuvezwa kwesayithi lakho kwi-intanethi. Isibonelo, akufanele usebenzise i- "pkg" uma ukhuluma nge "iphakheji" futhi ungabhali "ind" esikhundleni se "izimboni."
4. Izakhi ze-Condense ezingabalulekile ezibalulekile:
Uma ufuna ukufaka ubukhulu bezithombe, amagama angavamile noma izinombolo, kufanele uzifake ekugcineni bese uzama ukuzihlanganisa ndawonye..Qinisekisa ukuthi uye wakhawula futhi wahlanganisa izinto ezingezona ezibalulekile ngaphambi kokuba isihloko sakho sishicilelwe.
5. Sebenzisa amagama ngokulandelana kahle:
Kumele usebenzise izivumelwano zamagama ngokufanele ukwandisa ukuhlonza isayithi lakho kule imiphumela yenjini yokusesha . Ukukhiqiza nokwazisa amagama akusho ukuthi awukwazi ukusebenzisa izithombe eziningi. Esikhundleni salokho, kuqinisekisa ukuthi izinga lakho lesayithi alikethandanga.
6. Inani lamagama ahambisanayo nomkhiqizo:
Uma usebenzisa isithombe esifanayo njalo uma ikhasimende lakho liqala umkhiqizo omusha, ungase ulahlekelwe isayithi lakho kwisimo semiphumela yokusesha. Isibonelo, uma usebenzise logi njengesithombe esithombeni, akufanele uyisebenzise kaningi.
7. Izimfanelo zesithombe se-alt:
Umbhalo we-Alt ulungile kulabo abasesho ukubonakala abangaboni kahle. Uma uthembela kuso ukuze uhlanganyele abafundi abaningi futhi ngaphezulu, kufanele ulandele imininingwane yezici ze-alt ngendlela engcono. I-Google ibheka umbhalo we-altare njengesici esibalulekile futhi esibalulekile.
8. Izihloko zesithombe sobuciko:
Kufanele wenze iziqu zezithombe zakho ngokuhlakanipha futhi uqiniseke ukuthi izihloko zihambisana nomnqopho we-athikili wakho. Kufanele ufake amanye amagama angukhiye esithombeni somfanekiso ukwandisa ukuchayeka kwesiza sakho kwi-intanethi.
9. Engeza amazwibela:
Ukwengeza amagama-ncazo kubaluleke kakhulu njengoba kusiza iwebhusayithi ukuthi ikwazi ukuthuthukisa isimo sayo. Zama ukuxuba amagama angukhiye nemishwana ngenkathi ungeza amazwibela.
10. Imininingwane yombhalo wokunamathisela:
Ungaphinda uhlanganise umbhalo we-anchor ozoholela isivakashi sakho kwenye i-athikili. Imininingwane yombhalo we-anchor yenza njenge-backlink kusayithi lakho, usebenzisana nabasebenzisi ngokuningi nokudala umbono ongcono.